China igwe anaghị agba nchara 4 burner gas grill Mepụta na Factory | Chuliuxiang
Igwe anaghị agba nchara 4 ọkụ gas grill
Enwere ike ibugharị ma dị mma: Site n'ụkwụ siri ike maka nkwụsi ike emelitere, grill table a zuru oke maka obere mmemme nri n'èzí, dị ka ịma ụlọikwuu na ọdụ ọdụ.
Ngwa ngwa na ọbụna kpo oku: Ndị ọkụ anọ na-achịkwa iche iche na-enye ike isi nri 34,000 BTU; na a dị mfe push nke integrated piezo igniter, ha na-ahụ ngwa ngwa na ọbụna kpo oku. Enwere ike gbanwee okpomọkụ dịka ịchọrọ site na ala ruo elu.
Ptrotable barbeque 4 ọkụ gas grill
Nha ngwaahịa 540*410*220mm
Ebe nri 560*250
Igwe ọkụ ọkụ ọkụ 4 a nwere ọtụtụ ngwa na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia ma ọ bụ Eshia. Enwere ike iji ya maka ebumnuche azụmahịa, iji ụlọ, maa ụlọikwuu, na ihe ndị ọzọ. Enwere ike itinye kọmpat na obere ihe eji eme ihe na ụgbọ ala nri ma ọ bụ camper; enwere ike itinye ya na tebụl ma ọ bụ tinye ya (n'ezie nke a chọrọ nhazi ọzọ).
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ nri azụ n'anya, mgbe ahụ grill gas a bụ ihe anwansi nye gị. Ọ nwere ike inyere gị aka inweta nri dị ụtọ (shellfish ma ọ bụ oporo na crabs dabara adaba). Ọ nwere ike idowe ụtọ nke nri azụ, n'adịghị ka unyi na-esi nri. Ejikọtara ya na isi nke carbon.
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ skewers n'anya, mgbe ahụ, nke a dịkwa mma maka anụ ụlọ mmanya n'èzí, ngwa ngwa, ahụike na nke na-atọ ụtọ.
Kedu ka esi eji?
Nke mbụ, họrọ valvụ dị ala iji jikọta karama gas, nke mere na grill na-enweta gas dị ka ike;
Mgbe ahụ, n'akụkụ nke ọzọ nke trachea na anyị na-akpọ oven n'ime akpa ọdụ ụgbọ mmiri. Na ọkụ oven obere njedebe ịdọrọ mgbanaka mgbanaka, dọpụta ihe ntanye na ntanye pan na mmiri ụfọdụ (mmiri ebe a bụ iji kwado nlekọta dị ọcha, 2 ọ bụ iji gbochie okpomọkụ ahụ dị oke elu, iji nweta mmetụta nke okpomọkụ na-adịgide adịgide, ya mere mmiri n'ezie ọ bụ eluigwe na ala), mgbe ahụ, na ọkụ ọkụ iji gbochie anyị kwadebere maka igbochi ọkụ ọkụ (na nhọrọ nke iko na mpempe akwụkwọ ígwè).
Nke gara aga: Igwe ọkụ ime ụlọ
Osote: Igwe ọkụ Rotisserie Na-atụgharị Anụ Anụ Mkpọ
ebe a na-ama ụlọikwuu gas grill
China 4 grill ọkụ
igwe anaghị agba nchara imi
10 ọkụ gas grill
Ụdị 4 ọkụ gaqs grill
Igwe anaghị agba nchara 3 gas grills
Azụmahịa bbq gas na-enweghị anwụrụ ọkụ
Ebe a na-ama ụlọikwuu isi nri gas grill